कभर आपूर्तिकर्ताको साथ सर्वश्रेष्ठ ल्याटेक्स तकिया | Rayson
रेसन औद्योगिक क्षेत्र, हूशा रोड, शीशान, फोशन उच्च-टेक जोन, गुआंग्डोंग, चीनमा। मुख्य उत्पादनहरू कभर आपूर्तिकर्ताको साथ सर्वश्रेष्ठ ल्याटेक्स तकिया
उत्पादनको कार्यक्षमता हाम्रो बलियो आर द्वारा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरिएको छ
& D टीम।
हामी कडाईका साथ मानक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रक्रियाहरुको अनुसरण गर्न को लागी हाम्रा उत्पादनहरु लाई हाम्रो ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई मिल्दछ वा अधिक गर्दछ। थप रूपमा, हामी सम्पूर्ण विश्वभर ग्राहकहरूको लागि बिक्री पछि सेवाहरू प्रदान गर्दछौं। हालसम्म रेसनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण पार गरिसकेका छन। हाम्रो नयाँ उत्पाद सहित सबै उत्पादनहरू अभिनव डिजाइन, ग्यारेन्टी गुण, र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु को साथ प्रदान गरीन्छ। वर्षौंको विकास पछि, हामीले विश्वभरि हाम्रा ग्राहकहरूसँग दीर्घकालीन सहयोग सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं। कृपया सुनिश्चित हुनुहोस् कि हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरू निर्यात गर्ने अधिकार छ र वितरित सामानहरूमा त्यहाँ कुनै नोक्सान हुनेछैन। हामी तपाईको जिज्ञासालाई स्वागत गर्दछ र कल गर्दछौं।
म केहि नमूनाहरू कसरी लिन सक्छ？ तपाईंले हाम्रो प्रस्ताव पुष्टि गर्नुभयो र हामीलाई नमूना लागत पठाउनुभयो भने, हामी १~ ~ २० दिन भित्र नमूना समाप्त गर्नेछौं। तपाईले एक्सप्रेस कम्पनीलाई हाम्रो कम्पनीबाट नमूना लिन को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले हामीलाई DHL, FedEx वा UPS संकलन खाता नम्बर पठाउन सक्नुहुनेछ, हामी तपाईको खाताबाट नमूना तपाईलाई पठाउन सक्दछौं। तपाईले मलाई मेरो आफ्नै डिजाईन बनाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ वा मेरो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पाद मा लोगो? हामी तपाईंको डिजाइन अनुसार गद्दा गर्न सक्दछौं वा OEM सेवा प्रदान गर्न केवल तपाईंलाई हामीलाई तपाईंको उत्पादन कलाकृति वा लोगो फोटो दिन आवश्यक छ। कसरी रोल्ट अप गद्दा खोल्ने? १. आफ्नो बेडरूममा सपाट सतहमा दफ़्ती राख्नुहोस्, ध्यानपूर्वक गद्देलाई बाहिर तान्नुहोस् र तपाईंको ओछ्यानमा राख्नुहोस्। २. सतर्कतापूर्वक बाहिरी झोलालाई काट्नुहोस् क्यान्सरको साथ प्लास्टिकको नराम्रो वा गद्दे नलिएको निश्चित गर्नुहोस्, चक्कु मुद्दा नलगाउनुहोस्। R. तपाईंको ओछ्यानमा भ्याकुम-छाप लगाइएको गद्दा रोल आउट गर्नुहोस् C. गद्दे तुरुन्तै विघटन गर्न थाल्दा घडीको साथ प्लास्टिक बैग काट्नुहोस्, प्लास्टिकको झोला हटाउनुहोस्। A. तपाईँको नयाँ गद्दा पूर्ण रूपमा विस्तार गर्न २ 24 घण्टा अनुमति दिनुहोस्।